Talooyin Top Si Socda Europe By tareenka In 2020 | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Talooyin Top Si Socda Europe By tareenka In 2020
Socdaalka Europe by rail waa caado dheer in aan la tegey si dhaqso ah – Tareenadu waa dhaqsiyaha badan, bey'adda u fiican, iyo habka ugu wax ku oolka badan ee kolba meel looga guuro. Inkastoo nidaamka tigidhada tareenka xanuunka soo abaabulo marti tareenka, wax badan oo ka mid ah qorshaynta iyo diyaarinta hadhaagii. Si aad u caawiso aad qorshaynayso safar ugu fiican Yurub, halkan waxaa ku qoran talooyin sare si ay u safraan Europe tareen.
Plan your route when you Socda Europe by tareenka
Si aad ugu safarto Yurub tareen 2020 waxaa muhiim ah in laga fiirsado qorsheynta jidkaaga iyo inta waqti ee aad ku qaadan doontid goob kasta oo aad tagtid. Haddii Amsterdam, Berlin, London, Milan, Paris, iyo Venice waa on liiska waajib-arki buuxda, xisaabiso wadada ugu macquulsan in la sameeyo taasi dhici. Samee liis ay ku qoran meelaha aad rabto inaad aragto iyo sida in aad si qallafsan khariidada kartaa safarkaaga. Go'aanso on taariikhaha aad iyo inta maalmood ee aad ku qaadan doonaan meel kasta si aad u buuxiso faahfaahin wadada.
Ha isku dayin in ay alaabahooda aad faahfaahin la dalal aad u badan
One of the worst things you can do when you Travel Europe by Train is to try and fit in too much. Waxaa jira u janjeera in dabiiciga ah si ay isugu dayaan oo jam magaalooyinka iyo wadamada badan intii suurto gal galay safarkaaga, si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax dhibic in qaadashada safarka haddii aad ma in ay la kulmaan caga kasta si sax ah! xirxiraan aad meelaha badan aad faahfaahin noqon kartaa qaali ah oo u soo jeesan kartaa fasax galay isku dari kara ka mid ah hotel jeeg-tago iyo hubi dheceen.
Waxa muhiim ah inay ku raaxaystaan ​​stop kasta si buuxda u badan in ay isku dayaan oo ku haboon oo aad u badan in. Waxaad badbaadin doonaa on gaadiidka oo ay helaan waqti dheeraad ah si ay u sahamiyaan meelaha aad.
Marka la qorshaynayo wadada si aad u Socda Europe by tareenka, hubiyaan si loo hubiyo lacagaha waddammada. Ma aha dal kasta oo Europe isticmaalaa Euro ah. Xataa qaar ka mid ah xubnaha Midowga Yurub, sida Bulgaria iyo Croatia, weli isticmaalaan lacagta u gaar ah oo u gaar tahay dalkooda. Fiiri liiska this ee Euro iyo dalalka aan Euro.
Qoraal ay wadaagaan App-ka Beddelka Lacagta Dhaqsaha Badan (@currencyconverterapp)
hoy Kitaabka ka hor
In kastoo ay suurtogal u tahay inay jartaan hotels iyo hostels sida aad meel u guurto meel, waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad isku daydaa inaad aad ugu wanaagsan ee aan meel yimaadaan hoy lahayn xaqiijisatay. Isku day inaad jartaan aad hostels/hotels ka hor mid ka mid the first to saddex magaalo, gaar ahaan magaalooyinka caanka ah inta lagu guda jiro xilli sare sida Berlin iyo Prague. dhacdooyinka, sida ciidaha magaalooyinkooda, sidoo kale saamayn ku heli karo. Ma aha walwal ku saabsan hab degaan aad waqtigaaga ku qaataan karaa samaynaya waxyaabo aad u badan, sida meelaha iyo riyaaqayaa wakhtiga aad firaaqada!
Habeen dhaxa intii macquul ah – Socda Europe by tareenka
Haddii aad ku talo jirto faqri hal maalin oo kaliya magaalo, isku dayaan in ay halkaas ka heli by tareen habeenkii. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in la waqti aad inta lagu jiro maalinta safarka By qaadashada tareen habeenkii ah, aad awoodid loo badbaadiyo lacag on deggan oo waxay yeelan karaan waqti dheeraad ah si ay u sahamiyaan aad u socoto. Marka tayaasha aad habeen tigidhada tareenka loo hubiyo in si loo hubiyo inta ay qaadato si ay u helaan ka meel kale.
Dadka kala hadal Tareenkaaga safarka Yurub
U hubso in aad la hadashid ah deegaanka ama rakaabka kale ee aad safarka tareenka. Macluumaadka in ay idin siin doono, wuxuu noqon karaa qiimo ka badan wax kasta oo aad ka heli doontaa in Hanuuniye safarka. By la hadalka dadka kale, waxaa lagugula talin laga yaabaa on the meelaha ugu wanaagsan in la cuno, si ay u tagaan cayaar, GEMS qarsoon, weyn meelaha meelaha, iyo habka ugu fudud ee agagaarka ka heli.
Ayaa qorsheyneysa in aad ku Socda Europe by tareenka ee 2020? Iska bilaabay ilaa hayo taariikhda la tigidh ugu fiican tareenka bixisaa on our Facebook iyo Twitter bogagga ama na soo booqato Save Tareen A online waayo, qiimaha tareenka looga adkaan badan oo Yurub
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-tips-travel-europe-train-2018%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / PL inay / de ama / ru iyo luuqado badan.